သင်တန်းတွေအတွက် ကစားနည်းများ (၈) – JQY's Blog
Home	/ Blog / သင်တန်းတွေအတွက် ကစားနည်းများ (၈)
သင်တန်းတွေအတွက် ကစားနည်းများ (၈)
ကစားနည်းများ ပိုစ့်တွေကို ကျွန်တော့်ရဲ့ http://jjqqyy.wordpress.com မှာ တော်တော်လေး ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခု ဒီမှာပဲ ဆက်ရေး ဖြစ်သွားမယ် ထင်ပါတယ်။ ဟိုဘက်မှာတော့ ဇော်ဂျီ ဖောင့်နဲ့ပဲ ရေးဖြစ်ပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက် – တက်ကြွစေရန်
လိုအပ်ချိန် – ၁၀ မိနစ်
လူဦးရေ – သင်တန်းသားအားလုံး
လိုအပ်ပစ္စည်း – မရှိ
လုပ်ဆောင်နည်း အဆင့်ဆင့်။ ။ သင်တန်းသားများကို အညီအမျှ နှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။ ထို့နောက် သင်တန်းမှူးမှ သင်တန်းသား များကို အောက်ပါအတိုင်း စေခိုင်းပါ။ အမြန်ဆုံးနှင့် အမှန်ဆုံး ပြုလုပ်နိုင်သည့် အဖွဲ့ကို အနိုင်ပေးနိုင်သည်။ အရှည်ဆုံး – ဟု အော်လိုက်လျှင် အဖွဲ့လိုက် အရှည်ဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ အရှည်ဆုံးတွင် သင်တန်းမှူးမှ အကျႌစသည်ကို အသုံး ပြုခွင့် ပေး မပေး သဘောတူညီမှု အရင် ရယူထားရမည်။ ထို့နောက် အပုဆုံး၊ အမြင့်ဆုံး၊ အတိုဆုံး၊ အဝိုင်းဆုံး စသဖြင့် စေခိုင်းသွားနိုင်ပါသည်။
လိုအပ်ချိန် – ၁၀ မိနယ်
လုပ်ဆောင်နည်း အဆင့်ဆင့်။ ။ သင်တန်းသားအားလုံးကို ဝိုင်းထိုင်စေပါ။ သင်တန်းသားတစ်ဦးကို ဝိုင်းအပြင်တွင် နေစေပါ။ ထိုအပြင်တွင် နေသော သင်တန်းသားမှ ဝိုင်းကို ပတ်၍ သူအလိုရှိသော သူကို ခေါ်၍ How do you do? ဟု လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။ ထိုအခေါ်ခံရသူကလည်း How do you do? ဟု ပြန်နှုတ်ဆက်ပါ။ ပြီးလျှင် နှစ်ဦးသား ဝိုင်းကို ပတ်၍ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ပြေးပါ။ နေရာလုစေပါ။ နေရာ မရသူကို ဆက်လက်၍ အခြားသူများကို အထက်ပါနည်းအတိုင်း ပြုလုပ်စေပါ။
တစ်နည်း။ ။ သင်တန်းသားအားလုံးကို ဝိုင်းထိုင်စေပါ။ သင်တန်းသားတစ်ဦးကို ဝိုင်းအပြင်တွင် နေစေပါ။ အပြင်တွင် နေနေသူထံတွင် ပစ္စည်းတစ်ခုခု ကိုင်ထား၍ ဝိုင်းကို လက်ယာရစ်ပတ်နေစေပါ။ မိမိအလိုရှိသူ၏ နောက်ကျောတွင် ထိုပစ္စည်း ကိုချထားလိုက်ပြီး ဝိုင်းပတ်အတိုင်းပြေးပါ။ မိမိနောက်တွင် ပစ္စည်းတစ်ခုခု (ဘောလုံးအသေး ဆိုလျှင် ပိုကောင်းပါသည်။) ချထားခံရသည်ကို သိလိုက်သူက ထိုပစ္စည်းဖြင့် ထိုသူအား လှမ်းပစ်နိုင်သည်။ ထိသွားပါက မိမိနိုင်၍ မထိပါက မိမိရှုံးသဖြင့် ဝိုင်းကို ပြန်ပတ်၍ အခြားသူ တစ်ဦးဦး၏ နောက်တွင်ချလိုက်၍ ဆက်လုပ်သွားပါ။
လိုအပ်ပစ္စည်း – ခေါင်းအုံး (သို့မဟုတ်) အခြားပစ္စည်းတစ်ခုခု
လုပ်ဆောင်နည်းအဆင့်ဆင့်။ ။ သင်တန်းသားအားလုံးကို စက်ဝိုင်းပုံစံ မတ်တပ်ရပ်စေပါ။ ပြီးလျှင် ပံ့ပိုးသူ (သို့) ကူညီလိုသူ တစ်ဦးဦးမှ ခေါင်းအုံး (သို့) အခြားပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ယူလာ၍ သက်ရှိတစ်ဦးလို ဆက်ဆံပါ။ ဥပမာ – ချစ်သူ၊ ကလေး၊ စိတ်ကောက်နေသူ စသဖြင့် ပြုလုပ်၍ သရုပ်ဆောင်ကာ ပြောဆိုပါ။ ထိုအထဲမှ လုပ်ပြသူအတိုင်း သင်တန်းသားများမှ မိမိညာဘက်ရှိ သင်တန်းသားများကို တစ်ယောက်ချင်းစီ ထိုအလယ်မှ ပြုလုပ်သွားသည့်အတိုင်း သရုပ်ဆက်ဆောင်၍ ပြောစေပါ။ အမျိုးသား အမျိုးသမီးကြားညှပ်ထားလျှင် ပိုကောင်းသည်။
ရည်ရွယ်ချက် – မှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေရန်
လိုအပ်ချိန် – ၁၅ မိနစ်
လူဦးရေ – သင်တန်းသားအားလုံး (စုံဂဏန်းဖြစ်ရမည်)
လိုအပ်ပစ္စည်း – မျက်မိကို ပိတ်နိုင်သည့် ပိတ်စ
လုပ်ဆောင်နည်းအဆင့်ဆင့်။ ။ သင်တန်းသားကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲလိုက်ပါ။ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ကို ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင် ရပ်စေပါ။ အလယ်တွင် မျဉ်းကြောင်းတစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားပေးပါ။ ထို့နောက် သင်တန်းသားများ အားလုံးကို ရုပ်ရှင် မင်းသား/မင်းသမီး (သို့မဟုတ်) နာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အမည်ကို ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် တစ်ဖွဲ့မှ သင်တန်းသားတစ်ဦးကို ရွေး၍ မျက်စိကို ပိတ်လိုက်စေပါ။ အခြားတစ်ဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက မိမိအဖွဲ့သားမှ နာမည်ဝှက်ပေးထားသော တစ်ယောက်ယောက်ကို ခေါ်၍ ထိုမျက်လုံးပိတ်ထားသူအား သွားပုတ်စေပါ။ အပုတ်ခံရသူက မိမိကို လာပုတ်သူသည် နာမည်အမှန်ဖြင့် မည်သူဖြစ်ကြောင်း ပြောရမည်။ ပြောနိုင်ပါက ထိုသူပါဝင်သောအဖွဲ့ ရှေ့သို့ ခြေတစ်လှမ်းတက်ရမည်။ ပြီးလျှင် တစ်ဖက်အဖွဲ့ကို ထိုနည်းအတိုင်း ပြန်လည်ပြုလုပ်ပါ။
ရည်ရွယ်ချက် – ပျော်ရွှင် တက်ကြွစေရန်
လူဦးရေ – သင်တန်းသား အားလုံး
လုပ်ဆောင်နည်းအဆင့်ဆင့်။ ။ သင်တန်းသားများအားလုံး တစ်ဖက်တွင် ပစောက်ပုံစံ ဝိုင်း၍ ထိုင်နေစေပါ။ ပံ့ပိုးသူ သို့မဟုတ် ကူညီလိုသူက ထိုဝိုင်း၏ ထိပ်တွင် ထိုင်နေပါ။ မျက်လုံးပိတ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် သင်တန်းသားများထဲမှ ငါးဦးကို တစ်ယောက်ယောက်က ကူညီ၍ ထိပ်တွင် နေနေသူအား တစ်ခွန်းချင်းစီ သွားပြောပါ။ ငါးယောက် သတ်မှတ်၍ တစ်ယောက် ချင်းစီ “ဘယ်သူက၊ ဘယ်သူ့ကို၊ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမှာ၊ ဘာလုပ်လိုက်တယ်” ပြောရမည်။ အားလုံး ပြီးသောအခါ ထိပ်မှ နေနေသူက အားလုံးကို စု၍ ကြေငြာရပါမည်။
လိုအပ်ချိန် – ၅ မိနစ် (သို့) ၁၀ မိနစ်
လုပ်ဆောင်နည်းအဆင့်ဆင့်။ ။ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲလိုက်ပါ။ တစ်ဖက်စီတွင် စု၍ နေစေပါ။ အဖွဲ့ထဲမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်က အမူအယာဖြင့် တစ်စုံတစ်ခု ထွက်လုပ်ပြပါ။ ဥပမာ ခေါက်ဆွဲကြော်ကို စားပုံပြုလုပ်၍ တစ်ဖက် အဖွဲ့အား ခန့်မှန်းစေပါ။ မှန်ပါက တစ်မှတ်ပေးပါ။ တဖက်အဖွဲ့ကိုပြန်လည်၍ အမူအယာဖြင့် တစ်ခုခုလုပ်စေပြီးလည်း ခန့်မှန်းစေပါ။